Ètoruola M Ịlụ Di ma Ọ Bụ Nwunye? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Brazilian Sign Language Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Italian Sign Language Japanese Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Moore Myanmar Norwegian Nzema Ossetian Polish Portuguese Romanian Russian Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swedish Tagalog Telugu Tetun Dili Thai Tsonga Turkish Turkmen Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Xhosa Zulu
Mmekọrịta gị na ndị ọzọ
Olee otú i si akpaso ndị mụrụ gị na ụmụnne gị àgwà? Ọ̀ na-esiri gị ike ijide onwe gị mgbe gị na ha na-emekọ ihe, ikekwe, gị ejiri olu ike ma ọ bụ ọnụ ọjọọ na-agwa ha okwu? Ọ bụrụ na a jụọ ha, gịnị ka ha ga-ekwu banyere gị? Otú i si akpaso ndị ezinụlọ gị àgwà na-egosi otú ị ga-esi na-akpaso di gị ma ọ bụ nwunye gị àgwà.—Ndị Efesọs 4:31.
Otú i si ele ihe anya
Ì nwere olileanya na ihe ga-aka mma, ka ị̀ na-eche na ọ ga-aka njọ? Ị̀ na-ekwenyere ndị ọzọ, ka ị̀ na-esi ọnwụ mgbe niile ka e mee ihe otú ị chọrọ? Ì nwere ike ijide onwe gị mgbe ihe siri ike? Ị̀ na-enwe ndidi? Ịmụta àgwà ndị so ná mkpụrụ nke mmụọ nsọ ugbu a ga-enyere gị aka ịbụ di ma ọ bụ nwunye n’ọdịnihu.—Ndị Galeshia 5:22, 23.
Otú gị na ego si aga.
Olee otú gị na ego si aga? Ị̀ na-ejikarị ụgwọ? Ị̀ na-anọgideli n’ọrụ i nwetara? Ọ bụrụ na ị naghị anọgideli na ya, gịnị mere? Ọ̀ bụ n’ihi otú ọrụ ahụ dị, ka ọ̀ bụ n’ihi onye ị na-arụrụ ọrụ, ka ọ̀ bụkwanụ n’ihi àgwà na-adịghị mma ị na-akpa? Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike iji ego gị eme ihe bara uru, olee otú ị ga-esi elekọta ezinụlọ gị?—1 Timoti 5:8.
Mmekọrịta gị na Chineke
Ọ bụrụ na ị bụ Onyeàmà Jehova, gịnị ka ị na-eme ka ị ghara imebi mmekọrịta gị na Chineke? Ị̀ na-ewepụta oge iji gụọ Baịbụl, iji gaa ozi ọma, na iji gaa ọmụmụ ihe? Onye ị ga-alụ kwesịrị ịlụ onye okwukwe ya siri ike.—Ekliziastis 4:9, 10.
Ị mata ụdị mmadụ ị bụ nke ọma, ị ga-enwe ike ichọta onye ga-enyere gị aka imekwu nke ọma, ọ bụghị onye na-agaghị enyere gị aka.
Otú Anyị Si Emeso Ndị Ọzọ Udo na Obi ụtọ Nwoke na Nwaanyị Ịkpa Alụmdi na Nwunye na Ezinụlọ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị Ndị Na-eto Eto